2018 ခုနှစ်တွင်အရေးအပါဆုံးခေတ်သစ်စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုကဘာတွေလဲ? | Martech Zone
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီအတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအတွက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်စရာခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်သမားများသည်သူတို့၏တရားဝင်ဒီဂရီအစီအစဉ်များတွင်မည်သို့ပြင်ဆင်နေကြသည်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အလုပ်ခွင်၌သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပိုမိုစျေးကွက်ဖြစ်စေမည့်ကွာဟချက်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုးရာဒီဂရီပရိုဂရမ်များ၏သော့ချက်မှာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည်မကြာခဏအတည်ပြုရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတတ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ သူတို့သည်အလွန်အပြုသဘောဆောင်သောအလုပ်သင်များမရှိလျှင်အလုပ်ခွင်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘွဲ့ရခြင်းကိုနှစ်များစွာနောက်ကျစေသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာပလက်ဖောင်းများ၏အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောရှုခင်းများကိုလေ့လာခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသောအချက်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုမဆိုတိုင်းတာရန်၊ တိုင်းတာရန်နှင့်စီမံရန်အတွက်စည်းကမ်းရှိသောချဉ်းကပ်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ငါဖွံ့ဖြိုးပြီးဒါကြောင့်ပါပဲ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း…ဒါဟာသင့်ရဲ့ပဏာမခြေလှမ်းကိုအောင်မြင်နိုင်သမျှသေချာစေမည့်အသေးစိတ်စာရင်းတစ်ခုပါ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းနည်းပညာနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စျေးကွက်သမားများသည်သူ၏မျိုးဆက်သစ်စားသုံးသူများ (Gen Z) နှင့်သင့်လျော်သောထိရောက်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောနည်းပညာများကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ Maryville တက္ကသိုလ်၌စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း
Maryville တက္ကသိုလ်သည်စျေးကွက်သမားများအလုပ်ခွင်တွင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောဤအသေးစိတ်စာရင်းကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များနှင့်အတူသူတို့၏အပြည့်အဝ post ကိုဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ, 11 ခေတ်မီစီးပွားရေးဆန်းသစ်တီထွင်သူများအတွက်ခေတ်မီစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှု.
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး - အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများသည်မူရင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနှင့်ဖန်တီးမှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးသောစျေးကွက်သမားများကိုသုံးနိုင်သည်။ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုသူတို့၏မဟာဗျူဟာ၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်၊ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစုကြီးများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းကသာသူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုရင့်ကျက်သောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဝက်ဘ်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအားလုံးသည်ဤနယ်မြေအတွင်းရှိအဓိကကျွမ်းကျင်မှုများဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းစျေးကွက် - အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၆၇.၃ ရာခိုင်နှုန်း - အမေရိကန် ၂၁၉.၈ သန်း - စမတ်ဖုန်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မိုဘိုင်းနည်းပညာကိုအရေးကြီးသည်။ မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်ကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်သို့ရောက်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းမှာကြီးမားသည်၊ အမေရိကန်များကသူတို့၏ဖုန်းများကိုတစ်နေ့လျှင် ၄၇ ကြိမ်ကြည့်နေသောကြောင့် ဒီကိန်းဂဏန်းဟာအသက် ၁၈ မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိအမေရိကန်တွေအတွက်နှစ်ဆနီးပါးရှိတယ်။ ဒီဖုန်းတွေမှာမိုဘိုင်းဒီဇိုင်း၊ မိုဘိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေပါ ၀ င်တယ်။
အီးမေးလ်စျေးကွက် - အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအဓိကမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်။ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ဝေရန်အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၊ စာရင်းပေးသွင်းထားသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမဟာဗျူဟာများနှင့်စာရင်းပေးသွင်းသူများ၏ကြီးထွားမှုမဟာဗျူဟာများသည်ဤမဟာဗျူဟာအတွင်းအဓိကကျသောသတ်ဖြတ်မှုများဖြစ်သည်။
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး - Gen Z ၏ ၇၀% သည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလူမှုကွန်ရက်များမှ ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်လူ ဦး ရေ၏ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော Instagram ကို အသုံးပြု၍ Instagram ကို အသုံးပြု၍ မျိုးဆက်၏လူကြိုက်အများဆုံးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းနောက် Facebook နှင့် Snapchat တို့က ၆၇% အသုံးပြုသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်စျေးကွက်သမားများသည်အကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ဝေရန်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းငါးခုကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာအဓိကကျွမ်းကျင်မှုမှာဆိုရှယ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု၊
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး - အော်ဂဲနစ်နှင့်လခပေးသောရှာဖွေမှုများမှတဆင့်အသွားအလာကိုရယူရန်စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂူဂဲလ်သည်၎င်း၏ algorithm ကိုတစ်နှစ်လျှင်အကြိမ် ၅၀၀ ကျော်မွမ်းမံသည်။ ကြီးထွားလာသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော (SEO) နှင့်အော်ဂဲနစ်တည်ရှိမှုသည်မြောက်အမေရိကဝင်ပေါက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး SEO ကုမ္ပဏီ၏ ၆၉% တွင်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ ရှာဖွေမှုကြော်ငြာများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် optimization သည်ဤနယ်ပယ်အတွင်းအဓိကကျွမ်းကျင်မှုများဖြစ်သည်။
ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု - ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းသောစျေးကွက်သမားများက ၄ င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဤဗီဒီယိုများသည်အင်တာဗျူးများ၊ ကာတွန်းနှင့်အခြားဇာတ်လမ်းပြောပြစတိုင်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Gen Z ကိုရောက်ရှိရန်အတွက်အလွန်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မျိုးဆက် ၉၅% သည် Youtube ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ၅၀% သောသူတို့သည်ဗီဒီယိုမောင်းနှင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို“ မပါဘဲမနေထိုင်နိုင်” ဟုပြောကြသည်။ ဒီနေရာမှာအဓိကကျွမ်းကျင်မှုမှာဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ကာတွန်းရုပ်ပုံနဲ့အကြောင်းအရာ curation ပါဝင်တယ်။
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - စျေးကွက်၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများတွင်သရုပ်ခွဲကိရိယာများကိုအသုံးပြုကြသည်။ Analytics သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်အသစ်များတွင်တွေ့ရှိရန်ဒုတိယအခက်ခဲဆုံးစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်သမား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်အခက်အခဲများရှိသော်လည်းစျေးကွက်သမား ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်သူတို့၏အဖွဲ့အစည်းများရှိသူတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်စီစဉ်ကြသည်။ အချက်အလက်ရှာဖွေခြင်း၊ အချက်အလက်မြင်ခြင်းနှင့်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဤနယ်မြေအတွင်းရှိအဓိကကျွမ်းကျင်မှုများဖြစ်သည်။
Blogging - စျေးကွက်ရှာဖွေသူ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အကြောင်းအရာများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဖြန့်ဝေရန်ဘလော့ဂ်များကိုအသုံးပြုသည်။ မကြာခဏဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အသွားအလာကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ တစ်လလျှင်ပို့စ် ၁၆ ခုထက်ပိုသောထုတ်ဝေသောကုမ္ပဏီများသည်လစဉ်ပို့စ် ၀ မှ ၄ အထိအကြားထုတ်ဝေသောကုမ္ပဏီများထက် ၃.၅ ဆပိုမိုအသွားအလာပိုများသည်။ ဤနယ်မြေအတွင်းရှိအဓိကကျွမ်းကျင်မှုများသည်တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ စာဖြင့်ရေးသားခြင်းနှင့်မူရင်းဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု - မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကသူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုသတ်မှတ်သောကျွမ်းကျင်မှုအစုံဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်သစ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အခက်ခဲဆုံးကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ ဘတ်ဂျက်ရေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ROI နှင့်မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုတို့သည်ဤနယ်မြေအတွင်းရှိအဓိကကျွမ်းကျင်မှုများဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံစွမ်းရည် - အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်စျေးကွက်သမားများအတွက်အခက်ခဲဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံရင့်ကျွမ်းကျင်သူများသည်ဖောက်သည်များ၏ ဦး စားပေးမှုနှင့်အပြုအမူများအပေါ်အလင်းဖြာပေးနိုင်ပြီး ၀ ယ်ယူသူများသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုမောင်းနှင်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုကူညီနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များ၏အပြုအမူဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းသည်ဤနယ်မြေအတွင်းရှိအရေးကြီးသောကျွမ်းကျင်မှုများဖြစ်သည်။
အခြေခံဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှု - စျေးကွက်ရှာဖွေသူ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်သစ်ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်၊ ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်အသစ်တွင်ရှာဖွေရန်တတိယအခက်ခဲဆုံးစွမ်းရည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်၎င်း၏ပုံစံအားလုံးတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာသည်အမြင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်။ ဤနယ်မြေအတွင်းရှိအဓိကကျွမ်းကျင်မှုများတွင်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းတို့ပါဝင်သည်။
Tags: analyticsစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဘွဲ့ဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ဒေတာများပုံစံအီးမေးလ်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒီဂရီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းMaryville တက္ကသိုလ်မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးပေးဆောင်ရှာဖွေရေးSearch ကိုစျေးကွက်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်uiအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုuxဗီဒီယို marektingဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု